यी चर्चित ५ मोडल…..पुरुषबाट महिला बनेका थिए ….! – Gorkhali Dainik
यी चर्चित ५ मोडल…..पुरुषबाट महिला बनेका थिए ….!
October 5, 2020 409
भारत र नेपालमा केही वर्ष अगाडि ट्रान्सजेन्डरहरुलाई हेर्ने नजर र अहिलेको उनीहरुको अवस्थामा निकै फरक पाइन्छ, त्यसै लगायतका देशमा समलि ङ्गीहरुको अवस्था भने राम्रो भएको छ । सर्वोच्च अदालतले तेस्रो लि ङ्गीको स्थान दिएपछि उनीहरु खुलेआम बाहिर आउन थालेका छन् । तर कतिपय मानिसले भने काेहि कलाकारले लि ङ्ग परिवर्तन गरेकाे भने थाहा पाएका छैन् । त्यसैक्रमा अाज हामि यस बिषयलाइ लिएर चर्चा गर्न गएका छाैँ । केही यस्ता चर्चित मोडलहरु छन् जसले ग्ल्यामरस दुनियाँमा निकै चर्चा पाइरहेको छ ।
निक्कीले पनि केटाको रुपमा जन्म लिएकी थिइन् । उनी युवतीका कपडाहरु लगाउन निकै रुचाउँथिन् । तर, उनको परिवार निकै कडा भएकाले उनका लागि यो सम्भब हुने निकै मुश्किल थियो । अन्ततः उनले परिवारको विरुद्ध गएर २००९ मा लि ङ्ग परिवर्तन गराइन् ।
Prevचर्चित ….हलिउडकी नायिकाले नै ३ वटा ‘स्तन’ शो गरेपछि…!
Nextनर्मल डेलिभरि हुँदा यौ*न स न्तुष्टिमा कमि आउने श्रीमानको गुनासो…. : डा. नुतन शर्मा
कक्षा ११ को नतीजा प्रकाशन को मिती तोक्दै, NEB ले दियो अत्यन्तै जरुरी सूचना !